Mogadishu Journal » 2018 » June » 8
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo booqday Xarunta Isgaarsiinta Jabuuti iyo Dekeda Dooraale
Mjournal :- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalmahaan booqasho ku joogay Jabuuti ayaa booqday xarunta isgaarsiinta dalkaas iyo Dekadda Dooraale. Wasiirka Warfaafinta iyo isgaarsiinta Jabuuti Cabdi Youssouf Sougueh iyo masuuliyiin kale ayaa wafdiga Ra’iisul...
Mjournal : -Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng Yarisow) ayaa ku wargeliyey Hay’adaha ay khusayso joojinta hawllaha dhul-simidda iyo kaawo qodista ee ka socda agagaarka Kawaan Bari bacdamaa ay keeneysey Khataro hor leh. Eng...
Mjournal :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degaanka Ceel-ure oo ka tirsan degmada Waajid ee gobolka Bakool, kana mid ah degaanadii xalay laga soo weeraray degmada Waajid ayaa saakay ciidanka ammaanka oo hawlgal ka wada waxa ay ku soo bandhigeen meydadka Lix nin oo...
Zidane ayaa baadi goob ugu jira sida uu koox cusub u qaban lahaa ka dib markii uu si lama filaan ah uu Real Madrid uga soo dhaqaaqay bishii lasoo dhaafay dhamaadkeeda. Faransiiska macalinkan u dhashay ayaa Bernabeu kula guuleystay saddex jeer oo xiriir ah tartanka champions...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdiga uu hogaaminayo ee ku sugan Jabuuti ayaa booqday degmadda Cali-cadde oo ka tirsan gobolka Cali Sabiix ee dalka Jabuuti, halkaas oo ay ku nool yihiin Qaxooti Soomaaliyeed oo ka...
Mjournal :- Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka digey cadaadis ugaga imanaya gudaha iyo dibbada midnimada dalka Soomaaliya waxana uu goluhu walaac ka muujiyay halista uu ururka Al-shabaab ku haya amaanka dalka Soomaaliya. Golaha oo shalay kulan yeeshay ayaa waxaa lagu...
Al-shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday degmada Waajid
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay fiidkii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Degmada Waajid ee gobolka Bakool, waxayna halkaasi kula dagaalameen Ciidanka dowladda iyo Ciidanka Itoobiya ee qeybta ka ah kuwa AMISOM. Shabaabka ayaa laba jiho ka weeraray...